Kutanga mhedzisiro paGeekbench yeM1 Ultra yakaunzwa paPeek Performance chiitiko | ndinobva ku mac
Ekutanga mhedzisiro paGeekbench yeM1 Ultra yakaratidzwa paPeek Performance chiitiko
Musi waKurume 8, Apple yakazivisa pasi rose itsva M1 Ultra chip iwo maviri M1 Max machipi akakochekera pamwe ne2,5 terabytes yebandwidth pakati pezviviri. Apple inoshandisa kufa-ku-kufa yekubatanidza inonzi UltraFusion kubatanidza vaviri vanofa pamwechete. Izvi zvinopa zvirevo pabepa rinosiya nhamba dzinoshamisa dzeM1 yekutanga yakaratidzwa muna 2020 kure kumashure. Asi ikozvino tine Geekbench yekutanga manhamba uye vangave vashoma sei, vanotiratidza mhedzisiro yakanaka.
Apple neChipiri yakaunza Mac Studio, iyo inouya neine simba M1 Max chip nekusarudzika. Nekudaro, iyo kambani inopawo inodhura modhi neM1 Ultra, chip nyowani, iyo mbiri M1 Max yakabatana pamwechete. Kutipa zano ririnani rekuita ikoko, bvunzo yeGeekbench inoratidza kuti Apple yazvino chip inokunda iyo 28-core Intel Mac Pro. Pawebhusaiti yayo, Apple inoenzanisa chip nyowani ne16-core Intel Xeon W processor inowanikwa muMac Pro. mhedzisiro yakaburitswa yeGeekbench yakaratidza kuti M1 Ultra chip ine simba kupfuura iyo 28-core Intel Xeon W, inova ndiyo yepamusoro-yekupedzisira processor iripo izvozvi mukombuta yedesktop yakasainwa neAmerican brand.
Sezvinotarisirwa, iyo M1 Ultra inowana 1747 pane imwechete core, iyo inenge yakafanana nemamwe maM1 akasiyana (sezvo musiyano mukuru pakati pavo ihuwandu hwemacores). Nekudaro, kana zvasvika kune akawanda-musimboti, iyo 1-musimboti M20 Ultra zvibodzwa a 24055 paGeekbench 5 bvunzo. Tichifunga izvi, ngatitarisei kune akatevedzana manhamba:
Iyo 3275-core Intel Xeon W-28M processor, ndiyo yakanyanya kunaka yaunogona kuwana neMac Pro, inosvika 19951 muMulti Core. Izvi zvinoreva kuti M1 Ultra inenge 20% nekukurumidza kupfuura yakanyanya kudhura CPU inowanikwa yeIntel Mac Pro.
Asi hazvigumire pano nekuti iyo Mac Studio nyowani yakanyanya compact uye inoshanda kupfuura Mac Pro. Zvino, iwe unofanirwa kuziva kuti Mac Pro haisati yarohwa maererano nekugona sanganisa maviri eRadeon Pro GPU ane 64 GB imwe neimwe, kana kutowedzera kusvika ku1,5 TB ye RAM.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Ekutanga mhedzisiro paGeekbench yeM1 Ultra yakaratidzwa paPeek Performance chiitiko
Apple nyowani Studio Display yekutarisa inoratidza yayo kushandiswa kwesimba label uye haungazvifarire
Iyo Mac Studio haina Thunderbolt 4 Pro asi Apple inoitengesa kwauri sechinhu chinowedzera